မဗေဒါရဲ့ ဗေဒါလမ်း: What's in my Bag?
လူတစ်ယောက်ရဲ့ အကျင့်စရိုက်ကို သူ့အခန်းကြည့်ပြီး လေ့လာနိုင်တယ်ဆိုသလိုပဲ။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အမူအကျင့်နဲ့ အကြိုက်ကို သူ့လက်ကိုင်အိတ်ကနေ အများကြီး သိနိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် ဒီပိုစ့်ဖတ်ပြီး မဗေဒါအကြောင်းတွေ တော်တော် မှန်းလို့ရလောက်ပြီမို့ နည်းနည်းတော့ ကြောက်ပေမဲ့လဲ ဒီပိုစ့်ကို မဗေဒါဘလော့ကို အမြဲအားပေးတဲ့ စာဖတ်သူစစ်စစ် “ဝိုင်း” က တောင်းဆိုလို့ ရေးဖြစ်လိုက်ပါတယ်။ (My readers must have known about me before anyway)
သူများအထင်ကြီးအောင် ဘာဘာညာညာတွေ အစပျိုးနေပေမဲ့ ကိုယ့်အိတ်ထဲကြည့်လိုက်တော့လဲ လူရှိန်မဲ့အရာ ဘာဘာညာညာ သိပ်မရှိပေါင်။ စက္ကူစုတ်တွေ အမှိုက်တွေက ခပ်များများ (အဲ့ကတည်းက ဘယ်လောက် စည်းကမ်းရှိလဲ သိလိုက်တော့)။ ကဲ စမယ်နော်…
ဒီလက်ကိုင်အိတ်လေးက မဗေဒါကို မင်္ဂလာလက်ဆောင်အဖြစ် မဇာခြည်လွင်က ဇန်နဝါရီ မင်္ဂလာဦးဆွမ်းကြွေးမှာပေးတာ။ Facebook ပေါ် သူငယ်ချင်းဖြစ်တာ ကြာပေမဲ့ အဲ့နေ့ကမှ အပြင်မှာ စတွေ့ဖူးတာ။ ဒါပေမဲ့ အပြင်သူငယ်ချင်းတွေလိုပါပဲ ရင်းရင်းနှီးနှီးရှိတယ်။ အစက ဒီအိတ်ကို ဘယ်သူပေးမှန်းမသိဘူး။ ဟိုနေ့က ဖေ့ဘွတ်ပေါ်မှာ ဒီပိုစ့်ရေးမယ်တင်လိုက်တော့မှ အဲ့အစ်မပေးမှန်းသိတာ။ Charles & Keith က အိတ်လေး။ ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ မဗေဒါက အိတ်ဆိုဒ် ခပ်ကြီးကြီးတွေကိုင်တယ်။ အိတ်ထဲ အကုန်အစုံ ပစ်ထည့်ထားလို့ရလို့။ ဒီအိတ်ဆိုဒ်လောက်လေးက ပထမဆုံးကိုင်တာ။ ဒါပေမဲ့ ဒီအိတ်ဆိုဒ်လောက်လေးကလဲ လွယ်ရပြုရလွယ်ကူပြီး လိုအပ်တဲ့အရာတွေအားလုံးလဲ ဆံ့လို့ သဘောတွေကျနေတာ။ အရင်အိတ်ကြီးတွေတုန်းက ရှိသမျှ အကုန်ပစ်ထည့်ပြီး မရှင်းဖြစ်တော့ အိတ်က လေးပြီး ကြီးနေတာပဲရှိတယ်။ ခုကျတော့ အိတ်ပြည့်ပြီဆို မလိုတာတွေ ရှင်းရှင်းထုတ်ရတော့ လိုတာလေးတွေပဲ ထည့်ဖြစ်တော့တယ်။ ပြီးတော့ လွယ်ရတာလဲ Bulky မဖြစ်တော့ပဲ ကိုယ်နဲ့ ချက်ချက်ကပ်ကပ်ဖြစ်နေတယ်။ စတိုင်လဲပိုကျတယ်။ အိတ်လေးပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။
ကဲ အိတ်ကို အဝလေးဟပြီး စပ်စုကြမယ်
၂။ Money, Money, Money
လက်ကိုင်အိတ်ထဲက ပိုက်ဆံနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အသုတ်ကို အရင်ပြမယ်နော်။ လက်ကိုင်အိတ်ထဲမှာ မိန်းကလေးတိုင်းတော့ ပိုက်ဆံအိတ်ထပ်ရှိမှာပေါ့နော်။ မဗေဒါမှာလဲ ရှိတယ်။ ညာဘက် အစွန်းဆုံးက အပြာနုလေး ပေါ့။ မဗေဒါက Wallet ဆို ယောင်္ကျား လေး ပိုက်ဆံအိတ်လို အသေးခေါက်ထားတာထက် အရှည်ကို ပိုကြိုက်တယ်။ ဒီပိုက်ဆံအိတ်အရှည်ကတော့ ဟိုမရောက် ဒီမရောက်ဖြစ်နေတာ။ ဘာလို့ အရှည်ကို ကြိုက်တာလဲဆိုတော့ ပိုက်ဆံ တွေ မခေါက်ပဲ ထည့်လို့ရလို့။ (ပြောသာပြောတာ ပြီးကျတော့လဲ အလွယ် ထိုးထည့်တာပါပဲ) ပြီးတော့ ကဒ်ထည့်ထဲ အကန့်လေးတွေ အများကြီးပါတာကိုကြိုက်တယ်။ မဗေဒါက ဘတ်စ်ကားစီးတဲ့ ကဒ်တို့၊ Gym ကဒ်တို့၊ ဘဏ်ကဒ်တို့ ခဏခဏ ထုတ်ရတဲ့ ကဒ်တွေ ခဏခဏပျောက်တတ်တယ်။ ဟိုးတစ်လောကပဲ IC ပျောက်သွားလို့ ဒဏ်ငွေဆောင်ပြီး ပြန်လုပ်နေရလို့ ခုမှ Honeymoon သွားဖို့ visa လျှောက်ရတယ်။ အဲ့ အိတ်ထဲမှာ အားလုံးထည့်ထားရင်တော့ မပျောက်ပါဘူး။ ခဏခဏ ထုတ်ပြီးသုံးရတာမျိုးတွေက ပျောက်တတ်တာ။ စောစာက ပုံ ၂ မှာ ဖြတ်ပိုင်းတွေ ထိုးထိုးထောင်ထောင် မြင်တဲ့အတိုင်းပဲ အဲ့ အိတ်ထဲမှာ ပိုက်ဆံတွေရယ် ကဒ်တွေရယ် အပြင် ဘဏ်စက်က ထွက်တဲ့ ပြေစာဖြတ်ပိုင်းတွေလဲ တချိန်ချိန် အသုံးဝင်နိုး နဲ့ သိမ်းထားသေးတယ်။ ပြီးတော့ တစ်ခါတစ်လေ ပတ်စပိုစ့်ဓာတ်ပုံတွေ၊ ရွှေရောင် ကျီချိတ်အိတ် နဲ့ ဟို membership ဒီ member ကဒ်တွေရှိတယ်၊ (အထင်မကြီးနဲ့ တချို့ကဒ်တွေက Expired ဖြစ်နေပြီထင်တယ်၊ မရှင်းပဲ အိတ်ထဲရောက်နေတာ)။ Wallet အလယ်ခေါင်က အကြွေအိတ်ထဲမှာလဲ စင်္ကာပူ အကြွေတွေအပြင် တစ်ခါတစ်လေ မလေးရှား အကြွေတွေနဲ့ သြစီ အကြွေတွေ ထွက်ထွက်လာသေးတယ်။ ဘယ်နှပြားရှိပြီး ဘယ်တုန်းက ဘယ်သူ့ကို မှားပေးခံလိုက်ရမလဲတော့ မသိဘူး။ အဲ့ အကြွေအိတ်ရဲ့ ဘေးအကန့်မှာကျ ဖုန်း SIM Card မျိုးစုံရှိတယ်။ MPT, Oredoo, Vodafone (သြစီသွားတုန်းက)။ မဗေဒါရဲ့ ပိုက်ဆံအိတ်လေးက သေးသာသေးတာ မလိုအပ်တာတွေနဲ့ ပြည့်နေတာပဲ။
အဲ… လိုအပ်တဲ့ ပိုက်ဆံကျတော့ သိပ်များများစားစားမရှိ… ခွိ… (အလှူခံပါတယ်)။ မဗေဒါက ဘဏ်ထဲကနေ ပိုက်ဆံ Withdraw လုပ်ရင် ကိုယ်သုံးဖို့ အများဆုံး ထုတ်မှ ၄၊ ၅ ဆယ်ပဲ။ ထုတ်ထားပြီးလဲ အလုပ်ရှိတဲ့ရက်တွေဆို ဒီလောက်လဲ မသုံးဖြစ်တော့ တော်တော်နဲ့ မကုန်ပါဘူး။ ပိုက်ဆံကုန်တာက အပြင်လျှောက်သွားမှ ကုန်တာလေ။ အပြင်လျှောက်သွားရင်လဲ ကိုယ်လိုမယ်ထင်သလောက်ကိုပဲ ထုတ်ဖြစ်တယ်။ လူ့သဘောက ထုတ်ရင် ထုတ်သလောက် ကုန်တာပဲလေ။ အထူးသဖြင့် အပြင်လျှောက်သွားရင် ကိုယ်လိုချင်တာ တွေ့တယ် ဒါပေမဲ့ အဲ့ဆိုင်က cash ပဲပေးလို့ရတဲ့ ဆိုင်သေးဖြစ်နေရင် မသုံးဖြစ်တော့ဘူးလေ။ အဲ့နေရာမှာ လက်ထဲ ပိုက်ဆံရှိနေရင် ဝယ်ပြီး ချောင်ထိုးမဲ့ ပစ္စည်းဖြစ်ရင် ဖြစ်သွားမှာ။ (ကိုယ့်အကြောင်း ကိုယ်သိတယ်။ အသုံးဝင်မှာထက် တိုလီမိုလီတွေ့ရင် ဆော့ချင်တာ၊ ဒါတောင် အိမ်မှာ အာ့မျိုးတွေ အများကြီး)။ ဒိတော့ မဗေဒါကို ခါးပိုက်နှိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ သိပ်အကြိုးမရှိလှပါဘူး။ Wallet ကလဲ Branded မဟုတ် ပိုက်ဆံကလဲ များများစားစားမပါ။ Credit Card ကလဲ သုံးတာနဲ့ မိရင်မိ၊ မဗေဒါက ပိတ်လိုက်ရင်လဲ သုံးမရပြန်။ ၂ ဦး ၂ဖက် အကျိုးမရှိဘူး။
ညာဘက်ကရေရင် ဒုတိယမြောက် အနက်ရောင် အိတ်ကလေးကတော့ မင်္ဂလာဆောင်တုန်းက လက်ဖွဲ့ထည့်ထားပြီး ရတဲ့အိတ်ကလေး။ အဲ့ အိတ်လေးထဲမှာတော့ ရောက်ဖူးတဲ့ နိုင်ငံတကာ ပိုက်ဆံ ရှင်းမထုတ်ရသေးတာတွေရှိတယ်။ ဒီပိုစ့်ရေးမယ်ဆိုပြီးဓာတ်ပုံရိုက်နေတုန်း ကိုရီးယားပိုက်ဆံတွေတွေ့တာနဲ့ ဟိုနေ့ကပဲ သွားလဲလိုက်တာ စင်္ကာပူ ၃၀၀ လောက် ထွက်လာတယ်။ စိတ်ထဲမှာ အဲ့ ပိုက်ဆံတွေ မလဲချင်ဘူး။ ငါထပ်သွားရင် သုံးလို့ရတယ်ဆိုတာမျိုး မသိစိတ်က နည်းနည်းတွေးနေမိတယ်ထင်ပါတယ်။ တကယ်တမ်း ထပ်သွားမှာလားဆိုတော့ အစီအစဉ်တော့ မရှိသေးဘူး။ ပြီးတော့ မြန်မာပိုက်ဆံတွေ၊ မလေးရှားပိုက်ဆံတွေ၊ US doller နည်းနည်းနဲ့ Malacca သွားတုန်းက စားထားသမျှကို blog post ရေးဖြစ်ရင် ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုပြီး သိမ်းထားတဲ့ receipt တွေရှိတယ်။ (ဒါပေမဲ့ မနှစ်က Malacca သွားထားတဲ့ပိုစ့်ရေးပြီးပြီဆိုတော့ ဒီနှစ်သွားတာကို ထပ်မရေးတော့ပါဘူး။ ဘာမှလဲ ထူးထူးခြားခြားမရှိပါဘူး)။ မဗေဒါ နေ့လည်ဘက် အလုပ်ကနေ ထမင်းထွက်စားရင် wallet ထက် အဲ့အိတ်နဲ့ ထွက်တာများတယ်။ အာ့ကြောင့် အဲ့အိတ်ထဲမှာ စလုံးပိုက်ဆံ ၁၀လောက်တော့ ပါတယ်။ ခုတော့ အကြွေတွေတောင် တိုးနေပြီ။ နောက်ပြီး Kopitium card ပါတယ်။ Kopitium ဆိုတာက food court ပါပဲ။ ကုမ္ဗဏီက ဟိုးနှစ် D&D တုန်းက Door gift အဖြစ် အဲ့ကဒ်တွေ လက်ဆောင်ပေးတုန်းက ရထားတာ။ Member ဆို ၁၀ရာခိုင်နှုန်းလျော့ပေးတယ်လေ။ မဗေဒါက Kopitium မှာ စားရတာကြိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ အလုပ်က ကိုယ်နဲ့ lunch သွားတဲ့သူတွေက အဲ့ကိုသိပ်မသွားချင်ကြဘူး။ I don’t know why.
ညာဘက်က ရေရင် ၃ခုမြောက် ရွှေရောင် အံပေါင်းအိတ်ပါးပါးလေးက ကုမ္ဗဏီက တရုတ်နှစ်ကူးမို့ အံပေါင်းပေးတာ။ သူတို့အယူအရတော့ အဲ့ပိုက်ဆံက လာဘ်ကောင်းလို့ ထီထိုးရမယ်တဲ့။ မဗေဒါလဲ ထိုးမယ်ဆိုပြီး ထည့်ထားတာ။ တကယ်တန်းထိုးဆိုတော့ ၁ မီလီယံပုံမှာမှ ၁ပုံပဲ ရှိတဲ့ Probability မို့ ထိုးလိုက်ရမှာ နှမြောမိပြန်ရော။ ငါ့ပိုက်ဆံနဲ့ပဲ ငါထိုးတော့မယ်။ ဒီပိုက်ဆံကတော့ ကုမ္ဗဏီက ပေးတဲ့ ရတောင့်ရခဲ မုန့်ဖိုးမို့ ကွကိုယ်ပဲ သုံးမယ်ဆိုပြီး သုံးလိုက်တယ်။ ခု ရှိတော့ဘူး။
အဲ့ အဝါအိတ်လေးရဲ့ဘေးက 92 လို့ရေးထားတဲ့ စာအိတ် အဝါလေးက ဒီနှစ် D&D ကံစမ်းမဲပေါက်တာ။ Takashimaya shopping mall voucher ပေါက်တယ်။ မဗေဒါ ဒီကုမ္ဗဏီကို စပြီး ဝင်ကတည်းက D&D ၄ ခုစလုံးမှာ ကံစမ်းမဲ့ မပေါက်တဲ့ နှစ် တစ်နှစ်မှ မရှိဘူး။ စစဝင်ချင်းနှစ်ကဆို စတုတ္ထဆု Ipad ပေါက်တာ။ ပြန်ရောင်းစားလိုက်တာ ပွချက်။ နောက်ပိုင်းတော့ ကံက သိပ်မလိုက်တော့ဘူး တစ်နှစ်ထက် တစ်နှစ် ဆုရတဲ့ Rank က နိမ့်လာတယ်။ ဒါတောင် ဆု ၃၀၀ လောက်ထဲမှာ ၁၀၀ ထဲတော့ ဝင်သေးတယ်ဆိုတော့ တော်တော်များများထက်တော့ ကံကောင်းသေးတာပေါ့နော်။ ဘာပေါက်ပေါက် အနည်းဆုံး ကိုယ်ကံကောင်းသားပဲလို့ ခံစားရတဲ့ စိတ်လေးနဲ့တင် ကျေနပ်တယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်က ဆု Docking system စင်္ကာပူ ၅၀၀ ကျော်တန်ကြီးတော့ အိမ်မှာလဲ docking system တစ်ခုရှိပြီးသားမို့ ပြန်ရောင်းရင်လဲ ဈေးနှိမ်ဘာနှိမ် အလုပ်ရှုပ်တာနဲ့ ရန်ကုန်က ငယ်သူငယ်ချင်းကို မင်္ဂလာ လက်ဖွဲ့လိုက်တယ်။ ဒီနှစ် Takashima voucher ကတော့ ဘာသွားဝယ်ရမှန်းမသိဘူး။ သိတဲ့ အတိုင်း voucher သုံးချင်လို့သွားပါတယ် ကိုယ်က နောက်ထပ် ၁၀၀ ကျော်လောက် ထပ်ဆိုက်ရမဲ့ကိန်း။
နောက်ဆုံးက စာအုပ်အပြာလေးကတော့ မဗေဒါ ချွေးနည်းစာပေါ့။ အဲ့ထဲမှာ အဝင်က ၁လ၁ခါ ပြီးတာနဲ့ အထွက်တွေချည်းပဲ။ ဘယ်တော့များမှ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်မလဲ မသိဘူး။ အင်တာနက် Banking token က ခဏခဏပျောက်လွန်းလို့ အင်တာနက် ဘဏ်ကင်းကို သိပ်မသုံးဖြစ်ပဲ တရုတ်အဖိုးကြီး အဖွားကြီးတွေနည်းအတိုင်း ဘဏ်စာအုပ်လေးပဲ သုံးပြီး ကိုယ့်ပိုက်ဆံလေးတွေ အခြေအနေကို စောင့်ကြည့်တာများတယ်။ နောက်ပြီး ဘဏ်စာအုပ်က Visa လျှောက်တဲ့အခါမှာလဲ အသုံးဝင်တယ်။ တချို့သံရုံးတွေက အင်တာနက်က Print ရင် လက်မခံတာတွေရှိတယ်။ ဘဏ်စာအုပ် ကျတော့ အစစ်ပြရင် ပြီးပြီလေ။
ခုတစ်ခေါက်ကျတော့ အလှကုန်အလှည့်ပေါ့။ ခုမြင်ခဲ့ရတဲ့ အရာတွေထဲမှာ မဗေဒါ ဘာတစ်ခုမှ မယ်မယ်ရရ နေ့စဉ်မသုံးဖြစ်ပါဘူး။ အင်မာဂျန်စီ အရေးကြုံမှ သုံးဖြစ်တာများတယ်။ အလုပ်ကို ဘယ်လောက်ချစ်လဲဆို အလုပ်သွားတိုင်း မျက်နှာပြောင်ပဲ။ တစ်ခါတစ်လေ ရုပ်ကတော်တော်လေးစုတ်ပြတ်နေရင်တော့ အလုပ်ရောက်မှ နှုတ်ခမ်းနီကောက်ဆိုးလိုက်တယ်။ နှုတ်ခမ်းနီမဆိုးထားရင် လူတိုင်းက နင်နေမကောင်းဘူးလား လာလာမေးကြလို့။ ခု ယောင်္ကျားယူပြီးတော့ ပိုဆိုးတယ်။ ဗိုက်ကြီးနေလားပါ မေးခံရတယ်။ ကတောက် … ဒါ ဗိုက်ကို သက်သက်စော်ကားတာ…
မိတ်ကပ် ၂ခုလုံးကအိတ်ထဲမှာသာရှိတာ သိပ်လဲ မသုံးဖြစ်ပါဘူး။ အလုပ်ကနေ မထင်မှတ်ပဲ business meeting တွေဘာတွေ သွားရမယ်ဆိုမှ အိမ်သာထဲ အမြန်ပြေးပြီး အဆီတွေပျောက်အောင်လုပ်၊ ကရင်ဖတ်ရိုက် နှုတ်ခမ်းနီဆိုးလုပ်တာ။ အဖြူရောင်ဗူးသေးလေးက ကိုရီးယားသွားတုန်းက Etude House က ဝယ်လာတာ Oil control pad တဲ့။ ကိုယ်က အဆီပြန်တတ်တဲ့သူဆိုတော့ အာ့လေးကို သဘောကျတယ်။ သူက ကရင်ဖက်လိုပဲ ဒါပေမဲ့ ဂျက်ခဲကြီးမဖြစ်ဘူး။ အဆီတွေပဲ ပျောက်သွားတာ။ အာ့နဲ့ အဆီပြန်တဲ့နေရာတွေ ရိုက်လိုက်ရင် အဆီတွေတကယ်ပျောက်သွားတယ်။ ကရင်ဖက်ဆိုရင် အဆီတွေပေါ် ဂျက်ခဲကြီးဖြစ်သွားတယ်လေ။ သိလား။ အာ့လေးကို အရင်ရိုက်ပြီး အဆီတွေပျောက်မှ ဘေးက Faceshop က Phytogenic Infinite Power Foundation SPF 20 အရောင်က NB25 ကို ဖို့တယ်။
နှုတ်ခမ်းနီ ၂တောင့်ရှိတယ်။ (အဲ ပိုစ့်ရေးရင်းနဲ့မှ ထပ်မွှေလိုက်တော့ တကယ်တမ်းတော့ ၃တောင့်ရှိတာဗျ)။ ရွှေရောင်က Loreal Color Riche၊ အရောင်က BP401 Biege Sienna… မဗေဒါက အသားညိုတော့ အဲ့အရောင်က Nude လိုဖြစ်သလို အရောင်လေးလဲ နည်းနည်းရှိသလိုခံစားရတယ်။ သူ့ထက် Nude ဖြစ်တဲ့အရောင် Faceshop က ဝယ်ထားတာရှိတယ်၊ အာ့က အိမ်မှာ (ဘယ်ရောက်နေလဲတော့ မသိ)။ ဒါပေမဲ့ ဒီ Loreal အရောင်က အလုပ်မှာမစိုးဖြစ်ဘူး။ သူက မျက်လုံးတွေဘာတွေ အသေအချာချယ်ထားမှ လှတာ။ ဒီတိုင်းဆိုးရင် ပိုပြီးလူနာရုပ်ပေါက်သွားလိမ့်မယ်။ အဲ့နှုတ်ခမ်းနီက ကိုယ်အကျအန မျက်လုံးခြယ်တဲ့နေ့ အပြင်သွားရင် Backup အနေနဲ့ဆိုးတာ။ သုံးခဲလို့ သူက အရှည်ဆုံးကျန်နေတာသာကြည့်။
ညာဘက်အစွန်ဆုံးကတော့ Shiseido နှုတ်ခမ်းနီ RS711 Perfect Rouge လို့ခေါ်တယ်။ အဲ့ဒါလေးက ဟောင်ကောင်တုန်းက တွေ့ဖူးခဲ့တဲ့ စာရေးကောင်းတဲ့ ဘလော့ဂါအစ်မ မဆွေလေးမွန် စင်္ကာပူလာလည်တုန်းက လက်ဆောင်ပေးတာ။ သူ့ကိုတော့ အလုပ်မှာသုံးဖြစ်တယ်။ နှုတ်ခမ်းပေါ် ဆွဲရတာ တော်တော်ကောင်းတယ်။ နှုတ်ခမ်းခြောက်တတ်တဲ့သူတွေနဲ့ဆို အဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်။
ဘယ်ဘက်အစွန်ဆုံးက အတိုဆုံး NYX နှုတ်ခမ်းနီလေးကိုလဲ တော်တော်သုံးဖြစ်တယ်။ အဲ့အရောင်ကို ကြိုက်လို့။ သူက မျက်နှာ လိမ်းချယ်ထားရင်လဲ ဆိုးလို့ရတယ်။ ဘာမှ မလိမ်းထားလဲ လူနာရုပ်မပေါက်အောင် အဲ့ဒါချည်းပဲ ဆိုးထားလဲ အဆင်ပြေတယ်။ NYX ရဲ့ Matte Lipstick.. အရောင်က MLS11 Tea Rose။
အပေါ်က ဘီး ၂ချောင်းက အဖြူရောင် တစ်ခါသုံးဘီးလေးက ဇန်နဝါရီ မြန်မာပြည်ပြန်တုန်းက ချောင်းသာဟိုတယ်က တစ်ခါသုံးဘီးလေး။ အဲ့တုန်းက ဘီးယူလာဖို့ မေ့ကျန်ခဲ့လို့ ဟိုတယ်က တစ်ခါသုံးဘီးပေးတော့ အတော်ပဲဖြစ်ပြီး အိတ်ထဲထည့်ထားတာ ခုထက်ထိ အိတ်ထဲမှာပဲ။ ချောင်းသာပြန် အမှတ်တရ လက်ဆောင်လိုဖြစ်နေလို့ မလွှတ်ပစ်ချင်ဘူး။ အပေါ်က သစ်သားဘီးလေးကတော့ ဟိုနေ့ကမှ ဝယ်လိုက်တာ။ ဆံပင်တိုညှပ်ပြီး ပြန်ရှည်လာတော့ ဂုတ်ထောက်ပြီး ဆံပင်တွေ ကော့လန်နေလို့ အရေးရယ် အကြောင်းရယ်ဆို ဖီးရအောင်လို့။ ဒီ ၂ခုလဲ နေ့စဉ်အလုပ်မှာတော့ မသုံးဖြစ်ပါဘူး။ အင်မာဂျန်စီ လူရုပ်သူရုပ်မပေါက်မှ အမြန်သုံးရတယ်။ ဟိုးတစ်လောက သူဌေးက တခြားကုမ္ဗဏီကလူတွေနဲ့ Meeting တက်ဖို့ ကိုယ့်ပါ ခေါ်တော့ အဲ့နေ့ကျမှ ကိုယ်က ခါတိုင်းထက် ဘိုသီဘတ်သီအလုပ်လာတော့ ဒီရုပ်ကို မယုံနိုင်ဖြစ်ပြီး သူဌေးကို ပြန်မေးမိတယ် “Do I look messy?” ဆိုပြီး ။ သိဘူးလေး သူဌေးက သူ့မျက်လုံးထဲများ ကိုယ့်ပုံ သပ်သပ်ရပ်ရပ်မြင်နေလို့ Meeting ခေါ်တာလားလို့ပေါ့။ ဒီတော့ သူဌေးကလဲ အားမနာပကို ပြန်ပြောတာ “Yes! You are!” တဲ့… ခွိ… အာ့နဲ့ပဲ သူဌေးကို ခဏလေးစောင့်ပါ အိမ်သာလေးသွားပရစေ ဆိုပြီး အမြန်ပြေးရတယ်။ ခွိ…
၄။ IT, electronic, Security ပစ္စည်းများ
ကိုယ်အလုပ်သွားတိုင်း မပါမဖြစ်က Hard disk ပဲ အားရင်အားသလို blog ရေးဖြစ်ရင် ရေးဖြစ်မယ်လေဆိုပြီး ထည့်လာဖြစ်တာ။ ဓာတ်ပုံတွေပါတယ်လေ။ 1TB ရှိတယ်။ အဲ့ Hard disk ထဲမှာလဲ ဖိုင်တွေကို နာမည်ပေါင်းစုံပေးချင်တာပေးပြီး ကိုယ့်ဟာကိုယ် မေ့တာပါပဲ။ အဲလို အထားအသို သေသပ်တာ။
အလည်ကဟာက အိမ်သော့နဲ့ ibanking token အာ့က ဟိုးတစ်လောက ပျောက်နေတာ ခု ယောင်္ကျားယူပြီး အခန်းပြောင်းတော့မှ ကုတင်နဲ့ မွှေ့ယာကြားက ပြန်တွေ့တာ။ ibanking စက်လေးက ပျောက်သွားပြီဆိုပြီး အသစ်တောင် လုပ်ထားတယ်။ ဒါလေးက သုံးလို့မရတော့ဘူး။ ဟိုနေ့က အာ့နဲ့ ibanking ဝင်ပြီး ဝင်လို့မရလို့ ဘဏ်ဖုန်းဆက်ပြီး ကွန်ပလိမ်းမိသေး။ နောက်မှ ကိုယ်မှားတာဖြစ်နေတယ်။ ဟိ။ သော့ချိတ် ကြောင်ဖြူလေးက ဂျပန်သွားတုန်းက Asakusa ဘုရားကျောင်းကနေ ချစ်ချစ်ကုတ်ကုတ် ဝယ်လာတာ။ သူက Made in Japan လို့ ရေးထားတဲ့အထဲမှာ ဈေးအသက်သာဆုံးမို့။ ကျန်တဲ့ ပစ္စည်းတွေက Made in china ဆိုတာတွေချည်းပဲလေ။ အဲ့သော့တွဲလေးပျောက်သွားတုန်းက နှမြောဆုံးက အဲ့ သော့ချိတ်လေးပေါ့။
ဘယ်ဘက်စွန်းကတော့ အားလုံးတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲ နားကျပ်။ ဖုန်းဝယ်တုန်းကပါတာ။ ဒါပေမဲ့ တစ်ခါတစ်လေ အလုပ်က Laptop မှာလဲ တပ်ပြီးသုံးတယ်။ အရင်ကတော့ Dramania App က ကိုရီးယားကားတွေ ဒေါင်းလို့ရတဲ့အချိန်က ကိုယ်သိပ်မကြိုက်တဲ့ကားတွေကို အလုပ်အားတယ်ဆို အိမ်သာထဲသွားသွားကြည့်ဖြစ်တယ်။ ခုတော့ ဒေါင်းလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့ သိပ်တောင် မသုံးဖြစ်တော့ဘူး။ သီချင်းလဲ နားထောင်ခဲတယ်။ မကြိုက်လို့တော့မဟုတ်ဘူး ဘာနားထောင်ရမှန်းမသိလို့။
၅။ အမှိုက်များနှင့် မလိုချင်သောအရာများ
အိတ်ထဲမျာ နောက် random တွေကတော့ ပြေစာဖြတ်ပိုင်းတွေ Bill ဆောင်ဖို့ reminder တွေနဲ့ ဝင်ငွေခွန် filing လုပ်ထားတဲ့ စာရွက်ကို အိမ်က ဖိုင်ထဲ သိမ်းမယ်ဆိုပြီး မလုပ်ဖြစ်သေးတာတွေ။ အပေါ်ထောင့်မှာ ဟိုးတစ်လောက သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ Room xcape သွားထားတဲ့ အွန်လိုင်း ဘွတ်ကင်စာရွက်။ အာ့ကို ခုတော့ လွှတ်ပစ်လိုက်ပြီ။
အိတ်ကလေးထဲက ပစ္စည်းတွေ ထုတ်လိုက်တော့ ကျန်နေတာက Wallet ထဲလဲ မထည့်ဖြစ်၊ ဟို အိတ်အမဲလေးထဲလဲ မထည့်ဖြစ်ပဲ ဘယ်လိုက ဘယ်လို အိတ်ထဲ ဒီတိုင်း ပစ်ထည့်ထားတဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ အကြွေအနည်းငယ်ကိုတွေ့လိမ့်မယ်။ အိတ်ရဲ့ အတွင်းဘက် နံရံကပ်အိတ်လေးထဲမှာတော့ အလုပ်က လိပ်စာကဒ်ရယ် (My Business Cards) ဘတ်စ်ကားစီးတဲ့ကဒ်ရယ်ရှိတယ်။ ဒါပါပဲ။
ကဲ မဗေဒါ ဘယ်လို စည်းမရှိကမ်းမရှိလဲ ပေါ်ကုန်ပြီထင်တယ်။ ဒါမှမဟုတ် မိန်းကလေးတိုင်း ဒီလိုပဲလား?
သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ အိတ်ထဲမှာရော မရှိမဖြစ် အလိုအပ်ဆုံးအရာတွေက ဘာတွေလဲ ပြောပြပေးသွားအုံးနော်…
Posted by mabaydar at 6:28 PM
Yayy.. Thanks for posting it.. I am reading this at work.. Will comment again when I am home.. :) btw , u r not messy at all x
4/09/2015 10:19 PM
I didn't seen any medicine ,so young and healthy lady pop: -)
4/10/2015 9:27 AM
တို႔လည္း ျပန္အမ္းတဲ႔ ပိုက္ဆံေတြကို အဲလို အိတ္ထဲ ပစ္ပစ္ထည့္တတ္တယ္
4/10/2015 12:31 PM
Wine, Are all the girls same like me? haha What about u? I am still looking forward to your next comment.
Anonymous, Now I found out that most girls keep the medicine in their bags. but I just don't know which medicine should I keep. My mind set is that If i am sick, i will go and see doctor or take the medicine when I am back home.
TZN, ၾကည့္ရတာ မိန္းကေလးတိုင္း ဒီလိုပဲထင္တယ္ေနာ္...
4/11/2015 9:32 PM
အလုပ္လာရင္ လြယ္တဲ့အိတ္ ယူလာေလ့မရွိဘူး..
သံုးေခါက္ခ်ိဳး ပိုက္ဆံအိတ္ (ပံုမွန္ေယာက္်ားေလးေတြကိုင္တဲ့ အိတ္ထက္ေသးတယ္) ေဘာင္းဘီအိတ္ထဲထည့္.. လက္မွာ ဖုန္းနဲ့ Tablet ကိုင္ ... ဒီလိုပဲ အလုပ္သြားတယ္..
(Btw, I am notaguy, I amagirl:P )
4/14/2015 11:40 AM
အလွၿပင္ပစၥည္းေတြကလြဲရင္ က်န္တာ အကုန္တူတူပဲ.. ႏႈတ္ခမ္းနီေလးဆိုးရတာ အသံုးတည့္တယ္ဆိုလို႕ ..ၿပံဳးမိ..ကိုယ္တိုင္က ႏႈတ္ခမ္းနီဆို ညအိပ္ယာ၀င္ ႏႈတ္ခမ္းေၿခာက္လို႕ပဲ ဆိုးထွာ.. :P :P :P
4/16/2015 2:53 PM
Problem with Being Straightforward
Where to buy Myanmar Groceries in Singapore
ရောက်တတ်ရာရာနဲ့ စင်္ကာပူ သင်္ကြန် ၂၀၁၅ သာမီးနဲ့ အတ...
Differences between Kill Me, Heal Me and Hyde, Jek...